Accueil > Gazetin'ny nosy > KOLO ANAKA : NY HAVIZANANA HATRAMIN’NY FAHARERAHAN-TSAINA (Fizarana 13)
KOLO ANAKA : NY HAVIZANANA HATRAMIN’NY FAHARERAHAN-TSAINA (Fizarana 13)
28- Dr Raharison, midika ve izany fa ny tsy fahitana tory dia mety misy ifandraisana amin’ ny fitaizana, sy ny zavatra niainana ?
Mazava ho azy ! Efa hitantsika fa misy ampahany amin’ny fototarazo na génétique ny mibaiko ny famantaranandro biolojikan’ny tsirairay. Manaraka izany, ny torimaso dia misy ifandraisany koa amin’ ny fahazarana ao anivon’ ny fianakaviana sy ny fomba fitaizana. Mora mandray izay fomba azony avy amin’ ny ray aman-dreny ny zaza. Misy ohatra fianakaviana izay mpatory maraina sy tia manararaotra maka aina eo am-pandriana. Misy kosa ireo mpifoha maraina nohon’ny fitadiavana na koa fahazarana tsotra izao. Satria ny fifampitana fahazarana dia mety mahakasika koa ny torimaso. Alohan’ny fidiran’ny zaza mianatra eny amin’ ny garabola dia ny ny fotoana fatoriana no manamarika ny fisarahana voalohany eo amin’ny zaza sy ny ray aman-dreniny. Ny fotoanan’ny torimaso izany dia azo atao hoe kihon-dalana lehibe eo amin’ny fiainan’ny zaza. Satria eo am-pampatoriana zaza matetika no misy ny fampitan ‘ny ray na ny reny aminy ny tebitebin-tsainy, ny ahiahy sy tahotra. Ny torimaso ihany koa no hampitana ny fandaminan-tsaina. Ny torimaso koa anefa ary ny alina indrindra indrindra, dia mety midika ho fotoan-tsarotra, fotoana hieritreretan’ny zaza fa irery izy, na toy ny hoe nilaozana izy, ary izany aza mety manaraka azy mandra-pahalehibe. Tiana izany ny manamafy fa miankina amin’ny fombafomba entin’ny ray aman-dreny manomana ny fotoana hatorian’ny Zaza no mampirindra ny torimasony.
29- Inona izany no mahazava-dehibe ny torimaso ?
Ho antsika olombelona, ny fatoriana no fotoana hafahan-tsika mihaona sy mifandamina amin’ny tenantsika manokana. Fotoana ihany koa hakana aina na hery sy tanjaka ka hafahana miomana amin’ny fandaharana hatao ny ampitso. Miantoka ny filaminan-tsaina, ny fahasalamana ary koa ny fandanjalanjana ny fiainana andavanandro.
30- Fotoana fifankahitana amin’ny tena hoy ianao ny torimaso. Inona no mety dikan’izany ?
Raha efa ao am-pandriana ka mbola tsy tonga ny torimaso, dia mahazo aina isika satria afaka mamaky boky, mijery film na miresaka amin’ny finday. Rehefa tonga amin’ ilay fotoana fitadiavana torimaso kosa dia eo vao mety mananosarotra. Io fotoana io matetika dia mitranga ao anatin’ny aizina. Noho izany, io fiandrasana io dia azo atao hoe fihaonana amin’isika sy ny eritrerintsika izay mety mifamahofaho ka vao maika manelingelina ny fahatongavan’ny torimaso. Mety mitranga koa izany rehefa miara-matory ny olon-droa na olona maromaro. Mahafinaritra matetika ny fiarahana saingy tsy mitovy ny fahasarotan’ny tsirairay eo anatrehan’ny fahatongavan’ny torimaso. Amin’izay fotoana izay dia ny olona mahita tory faranay no mety tsy mahatanty fa lasa sorena ka mety vao maika tsy mahita torya. Mazava ho azy, fa raha mahavita mandamin-tsaina ianao alohan’ ny ora hatoriana dia mora ny fahitana tory. Fa raha mandeha lavitra kosa ny eritreritra na mamisavisa olana isan-karazany, dia hananosarotra ny fitadiavana an-dratorimaso. Ohatra raha sendra olona mierotra sy mora resi-tory ianao eo akaikinao dia efa mety manakana ny fitadiavanao torimaso sy mety hampavinitra anao izany.